श्रीमानलाई दोस्रो बिहे गर्नबाट रोक्न श्रीमतीले श्रीमानको औंला नै भाँ’चिदिइन् ! – List Khabar
Home / समाचार / श्रीमानलाई दोस्रो बिहे गर्नबाट रोक्न श्रीमतीले श्रीमानको औंला नै भाँ’चिदिइन् !
श्रीमानलाई दोस्रो बिहे गर्नबाट रोक्न श्रीमतीले श्रीमानको औंला नै भाँ’चिदिइन् !
admin February 5, 2022 समाचार Leaveacomment 54 Views
काठमाडौं – आफ्ना श्रीमानलाई दोस्रो बिहे गर्नबाट रोक्न खोज्दा एक श्रीमती आफै जे’ल पुगेकी छिन् । संयुक्त अरब इमिरेट्समा बस्ने यी एसियाली महिलाले आफ्ना श्रीमानले अर्की एक महिलासँग बिहे गर्न लागेको थाहा पाएकी थिइन् ।
त्यसपछि यी महिलाले आफ्ना श्रीमानको औंला नै भाँ’चिदिइन् ।यी दुई जनाबीच दोस्रो बिहेको विषयमा वि’वाद भएको थियो । त्यसपछि २५ वर्षकी यी महिलालाई उनका पतिले थ’प्पड हाने । यही रि’समा महिलाले पनि २४ वर्षका पतिको औंला समातेर जोडले ब’टारेर औंला नै भाँ’चिदिइन् ।
युएइको खलीज टाइम्सको रिपोर्ट अनुसार जाँचमा उनीहरुबीच पहिलेदेखि नै वि’वाद भएको र पछि कु’टपिटको अवस्था आएको खुलासा भयो । महिलाका पतिले उनलाई थ’प्पड हा’न्दा उनीमा २ प्रतिशत ब’हिरोपन आएको थियो ।महिलाले अधिकारीहरुलाई
बताएअनुसार उनका पति अर्की महिलासँग बिहे गर्न चाहन्थे । पतिले पनि पु’लिससँग आफ्नी पत्नी अर्को बिहेको वि’रुद्ध थिइन् र उनले आफूलाई कु’टेको र अ’पमानित गरेको बताए । उनका अनुसार उनकी पत्नीले उनको दा’हिने हातको औंला समातेर प’छाडि ता’निदिइन् जसका कारण औंला भाँ’चियो ।
युएइको क्रि’मिनल कोर्टले महिलालाई ६ महिनाको जे’ल स’जाय सुनाएको छ । स’जाय पूरा गरेपछि महिलाले युएइ बस्ने अनुमति पनि पाउने छैनन् ।
Previous नङमा सेतो आकार हुनुको अर्थ यस्तो हुन्छ: पढ्नुहोस
Next दुब्लो भएर हैरान हुनुहुन्छ ? बिहान दूधमा मिलाएर खानुहोस् यो चीज, पत्तै नपाइ बढ्नेछ तौल